महान पूर्वी जापान भूकम्पको स्मृति: प्रकोप क्षेत्रको भ्रमण गर्न पर्यटन फैलियो - Best of Japan
सान्रिकु (तोहोकु क्षेत्रको पूर्वी तट) बिस्तारै पुनः निर्माण गर्न थाल्छ
के तपाईंलाई मार्च ११, २०११ मा ग्रेट इस्ट जापान भूकम्पको बारेमा याद छ? भूकम्प र सुनामीमा १ hit,००० भन्दा बढी मानिस मरे जसले जापानको टोहोकु क्षेत्रमा प्रहार गरे। जापानीहरु को लागी, यो एक त्रासदी हो जुन कहिले भुल्दैन। हाल तोहोकु क्षेत्र द्रुत पुन: निर्माण भइरहेको छ। अर्कोतर्फ, प्रकोप क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या बढ्दो छ। यात्रुहरूले प्रकृतिको डर महसुस गर्छन् जसले धेरै व्यक्तिको जीवन लुट्यो र एकै साथ तिनीहरू आश्चर्यचकित भए कि प्रकृति कति सुन्दर छ। पीडित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले प्रकृतिको डर याद राख्नुपर्दा, उनीहरूले प्रकृतिले उनीहरूलाई धेरै अनुग्रह र पुनर्निर्माणको लागि कडा मेहनत गरेको कुराको कदर गर्दछन्। यस पृष्ठमा, म सान्रिकु (तोहोकु क्षेत्रको पूर्वी तट) लाई परिचय दिनेछु, जुन विशेष गरी तोहोकु जिल्लामा भारी क्षति भएको थियो। त्यहाँ, कोमल हेराईमा फर्किएको सागर एकदमै सुन्दर छ, र कडा बस्नेहरूको मुस्कान प्रभावशाली छ। किन तपाईं टोहोकु क्षेत्र भ्रमण गर्नुहुन्न (विशेष गरी Sanriku) त्यस्ता बासिन्दाहरूलाई भेट्न?
सुनामीले धेरै शहरहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त गर्यो
मिकी जो बासिन्दाहरूलाई बचाउनको लागि मरे
तोहोकु क्षेत्रको पुनर्जनन
सान्रिकु प्रकृति अझै सुन्दर छ र मानिस मैत्री छन्
मार्च ११, २०११ मा ग्रेट इस्ट जापान भूकम्प = शटरस्टक
मार्च ११, २०११ मा १:14::46 मा भूकम्पले एक क्षणमा तोहोकु क्षेत्रमा शान्तिमय जीवनलाई हटायो। त्यस समयमा मैले टोकियोको एउटा अखबारको कम्पनीमा काम गरें। म २ 11 औं तलामा थिए। म थिए जहाँ भुईँ, एक ठूलो छाल लाग्यो कि डु like्गा जस्तै काम्दै राखियो। मेरो भुइँमा धेरै टिभीहरू थिए। त्यो टिभी स्क्रीनमा, सडकमा कारहरू चलिरहेका थिए। सुनामीले एकपछि अर्को कारलाई ठक्कर दियो। हामी केहि गर्न सकेनौं।
ग्रेट इस्ट जापान भूकम्पमा १ 15,000,००० भन्दा बढी मानिस मरे। सुनामीका कारण 90 ०% डूब्यो।
तोहोकु क्षेत्रको पूर्वी तटमा, यस्तो ठूलो भूकम्प प्रत्येक सय सय वर्ष पछि एक पटक आउँदछ, सुनामीले गम्भीर क्षति पुर्‍याउँछ। यस कारणले गर्दा, बासिन्दाहरूले यो पाठ विरासतमा लिएका छन् कि "यदि ठूलो भूकम्प भयो भने, पहाडमा भाग्नुहोस् जे भए पनि।" तिनीहरूलाई भनिएको छ कि "यदि तपाईंले आफ्नो परिवार छोड्नुभयो भने पनि भाग्नुहोस्।" कोही बाँच्न छ। यद्यपि तिनीहरू आफ्नो परिवार र छिमेकीहरूलाई छोडेर भाग्न सक्दैनन्। यस भूकम्पमा पनि, त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू थिए जुन आफू वरपरका मानिसहरूलाई बचाउँनको लागि बलिदान चढाइएको थियो।
मिकी एंडो माइक्रोफोनमा कराउँदै थिए "कृपया पहाडीमा भाग्नुहोस्।"
जब एक प्रकोप देखा पर्‍यो, एक कर्मचारी सदस्य, मिकी एंडोले त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई यस भवनमा खाली गर्न बोलाए। मिकी सुनामीले आक्रमण गरे र मरे
धेरै व्यक्तिहरू आफू वरपरका मानिसहरूलाई मद्दत गर्न रोके, त्यसैले तिनीहरू बलि दिए। मिनामी सान्रिकु शहर कर्मचारी, मिकी एंडो (तब २ 24 बर्ष उमेर) उनी मध्ये एक थियो। मिनामी सान्रिकु-चोमा सरकारी भवनमा उनले बासिन्दाहरूलाई माइक्रोफोन "चिच्याउनै सकेसम्म छिटो पहाडमा भाग्नु" प्रयोग गरी त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई बोलाउँदैछिन्। यदि तपाईं यस पृष्ठको सुरूमा पोस्ट गरिएको यूट्यूब भिडियो हेर्नुभयो भने, तपाईं उनको आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ। जे होस्, त्यो आवाज बाटोमा गायब हुन्छ। उनी सुनामीबाट मरे।
मिकीको जुलाई २०१० मा बिहे भयो र सेप्टेम्बर २०११ मा विवाह समारोह गर्ने योजना बनायो। उनी एक अत्यन्तै भद्र र उज्जवल महिला थिइन। ठूलो भूकम्प र सुनामीले सजीलै त्यस्तो दयालु व्यक्तिको जीवन लियो।
मिनामी सान्रिकु टाउन सुनामीले ध्वस्त पारेको थियो। यद्यपि, बाँचेका बासिन्दाहरूले नयाँ शहर बनाउन थालेका छन्। यदि तपाईं मिनामी सान्रिकु-चो जानुहुन्छ, तपाईं भवन देख्न सक्नुहुनेछ जहाँ मिकी थियो। तपाईं धेरै कोमल बासिन्दाहरूलाई भेट्न सक्षम हुनुहुनेछ। तिनीहरू कहिल्यै निराश हुँदैनन्।
सेल्फ डिफेन्स फोर्स = शटरस्टक द्वारा भूकम्प प्रकोप उद्धार कार्य
प्रभावित क्षेत्रहरू बिस्तारै पुनर्निर्माणको सडकमा हिंड्न थालेका छन्। यदि तपाईं तलका युट्युब भिडियोहरूमा हेर्नुभयो भने, तपाईं मिनामी सान्रिकु-चोको हालको अवस्था देख्न सक्नुहुनेछ। धेरै प्रभावित क्षेत्रहरूले पहाडमा नयाँ आवासीय क्षेत्रहरू आदि विकास गर्न थालेका छन्।
धेरै युवाहरू टोकियो र अन्य क्षेत्रहरूबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा बसाई सर्छन्। उनीहरू प्रभावित बुजुर्ग व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दै छन् र नयाँ समुदाय सिर्जना गर्न कोशिस गर्दै छन्। म क्रमश गरी यो साइट मा तोहोकू क्षेत्र मा नयाँ जानकारी परिचय गर्न चाहन्छु।
कस्तूरीको शटरस्टकको एक तस्वीर
तोहोकु क्षेत्रको पूर्वी तटमा, त्यहाँ एक सानो रेलमार्ग छ "Sanriku रेलवे" लगभग १०० किलोमिटर उत्तर र दक्षिणमा। यस रेलमार्गले सान्रिकुको जनताको जीवनलाई सहयोग पुर्‍यायो, तर यो सुनामीले नष्ट गर्‍यो। यो रेलमार्ग बहाल गर्नु सान्रिकीका व्यक्तिहरूका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण थियो। धेरै व्यक्तिहरूले रेलमार्गको सञ्चालन पुनः सुरु गर्न एक अर्कालाई सहयोग गरे। निम्न भिडियोहरूले स्थितिलाई राम्रोसँग प्रस्तुत गरेको छ।
Sanriku रेलवे को आधिकारिक वेबसाइट निम्नलिखित छ। म एक शक्तिशाली होटल को साइट परिचय दिन चाहान्छु कि तल Sanriku को दर्शनीय जानकारी को सारांश दिन्छ।
>> Sanriku रेलवे को आधिकारिक साइट यहाँ छ
>> मिनामी सान्रिकी होटेल कान्योको आधिकारिक साइटलाई सान्रिकुको पर्यटक सूचना जान्न सिफारिस गरिएको छ।
जापानमा धेरै राम्रा ठाउँहरू छन्। इन्स्टाग्राममा पोष्टिंगका लागि उत्तम परिदृश्य को शूट गर्न, यो पनि सत्य छ कि त्यहाँ स्यानक्रुको भन्दा अधिक उपयुक्त ठाउँहरू छन्। जहाँसम्म, अब सान्रिकु क्षेत्रमा, त्यहाँ एक प्रकृति छ जुन अझ सुन्दर देखिन्छ, र अचम्मका बासिन्दाहरूको मुस्कान किनभने यसले कठिन समयहरू पार गर्यो। यदि तपाईं जापानमा गहिरो भावनाको स्वाद लिन चाहानुहुन्छ भने, म तोहोकु क्षेत्रमा यात्रा गर्ने सल्लाह दिन्छु, विशेष गरी सान्रिकु। तपाईं किन Sanriku को सुन्दर समुद्र सामना छैन?
के तपाइँ तोहोकु क्षेत्रमा सुन्दर समुद्र हेर्न चाहानुहुन्छ?
जापानमा भूकम्प प्रायः देखा पर्छ, साना भूकम्पदेखि लिएर शरीरले ठूलो घातक प्रकोप सम्म। धेरै जापानीहरु प्राकृतिक संकटहरू कहिले हुन्छ भनेर थाहा नहुने स crisis्कटको भावना महसुस गर्छन्। अवश्य पनि, वास्तवमा ठूलो प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्ने सम्भावना धेरै कम छ। धेरै जसो जापानी मानिसहरु 80० बर्ष भन्दा माथिको उमेर भन्दा बढी बाँच्न सक्षम भएका छन्। यद्यपि स crisis्कटको यो भावनाले जापानको भावनामा ठूलो प्रभाव पार्छ। मानिसहरूले प्रकृतिलाई जित्न सक्दैनन्। धेरै जापानी मानिसहरु यो प्रकृति संग संग रहन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने महसुस गर्छन्। यस लेखमा म तुलनात्मक रूपमा भर्खरको भूकम्प र ज्वालामुखी विस्फोटको बारेमा चर्चा गर्नेछु। जापान मा भूकम्प जापान मा भूकम्प जापान मा यदि तपाइँ केहि बर्ष को लागी जापान मा रहनुभयो, तपाईं कम्तिमा एक सानो भूकम्प को लागी अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। जापानी भवनहरू भत्काउनको लागि डिजाइन गरिएको छ यदि ठूलो भूकम्प आयो भने पनि। त्यसकारण डराउनुपर्दैन। जे होस्, यदि तपाईं जापानमा दशकौंसम्म बस्नुभयो भने, ठूलो भूकम्पको अनुभव हुने सम्भावना छ। २०११ मा, जब ग्रेट इस्ट जापान महान भूकम्प भयो, म टोकियोको गगनचुम्बी भवनमा काम गर्दै थिएँ र हिंस्रक हल्लाउँदै भवनको अनुभव गरे। पूर्वी जापान ठूलो भूकम्प प्रकोप, पूर्वी जापान ठूलो भूकम्प प्रकोप, मार्च ११, २०११ ग्रेट इस्ट जापान भूकम्प (हिगाशी-निहोन दाइसिन्साई) मार्च ११, २०११ मा उत्तरी होन्शुमा लाग्ने एकदमै ठूलो भूकम्प हो। करीव १ 2011,००० पीडित मध्ये% ०% भन्दा बढी भूकम्प पछि सुनामीको कारण मृत्यु भयो। पछि महान हन्शिन भूकम्प पछि ...